Kormeerida ku salaysan shaybaarka unugyada ee loogu talagalay dumarka ku nool gobolka Västmanland
Dhammaan dumarka ku nool gobolka Västmanland oo da’dooda u dhaxayso 23 ilaa 49 sano, waxaa saddexdii sano ba la siiyaa fursadda lagu kormeero caafimaadkooda, taasoo ku salaysan shaybaarka unugyada. Dumarka da’dooda u dhaxayso 50 ilaa 60 sano waxaa loo yeerayaa shantii sano ba hal jeer.
Rugta hooyooyinka oo haweeneyda ay ka tirsan tahay ayaa shaybaarka looga qaadayaa.
Qiimaha shaybaarka waa 200 karoon. Qiimaha shaqo kuma laha Xaddaynta heerka kharashka.
Ma u baahan tahay in saacadda lagu qabtay laga beddelo?
Haddii lagu soo diray warqad ku qoran ballanka kormeerida ku salaysan shaybaarka unugyada, kaasoo ku anfacayn waad iska beddeli kartaa adigoo adeegsanaayo goobta internetka Mina vårdkontakter ee ku salaysan adeegga elektroonikada. Haddii aad ballanka iska bedesho waxaa sannad gudahiisa ballan cusub ka qabsan kartaa goobta internetka Mina vårdkontakter.